Okrainiana Vehivavy Manao Ankivy Tsy Hanao Amin’ny Rosiana Lehilahy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2014 1:22 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Svenska, Deutsch, Italiano, русский, Français, 한국어, বাংলা, srpski, Ελληνικά, English
Ankivy ara-piraisam-batana ataon'ny vehivavy Okrainiana. Fango sy teny filamatra “Aza omena ny Rosiana”.
Taorian'ny fanakambanana an'i Krimea amin'i Rosia, sy ny resaka fanasaziana iraisampirenena, dia hita fa toa lasa zava-pahita andavanandro amin'ny tsy fahombiazan'ny politika eoropeana ity raharaha ity. Mety hisy fiovana ihany anefa izany. Tamin'iny herinandro lasa iny, nisy fanaovana ankivy vaovao niainga tao Okraina izay nanaitra ny fifantohan'ny Rosiana mpisera aterineto. Nisy Okrainiana vehivavy nanao fanentanana vaovao manao hoe “Aza omena ny Rosiana”—fanaovana ankivy tsy hanao firaisana ara-nofo amin'ny Rosiana lehilahy. Ny ezaka moa dia mameno ny ankivy goavana kokoa tsy hanjifa ny entambarotra Rosiana, izay hita misongadina eny amin'ny takelaby sasantsasany mandravaka ny lalamben'i Okraina aza.
Efa manana t-shirts eny amin'ny serasera sahady moa ny ankivy ara-piraisambatana, ary mitondra ny fango ofisialy avokoa izy rehetra ireo: felatanana roa mifanatona, miteraka fifanakaikezam-bika amin'ny fivaviana misokatra (jereo ny sary etsy ambony). Misy ihany koa ny tarigetra: “Aza manome azy amin'ny Rosiana!” arahin'ny andininy iray avy tononkalo “Kateryna” nivoaka 1838 avy amin'ny poeta Okrainiana Taras Shevchenko : “Ry maidans (tovovavy) mahafatifaty, tiava, fa tsy amin'ny Moskaly [ny Rosiana].”
Tamin'ny 23 Marsa, nanomboka nampiely ny sarin'ilay mpanohitra fanta-daza Valeriya Novodvorskaya miakanjo ilay t-shirt manao ankivy ny fanaovana ity ny aterineto. Rosiana i Novodvorskaya, izahy malaza amin'ny bika aman'endrika hafahafa sy amin'ny fampielezana ny petrakevitry ny tsikombakomba maro, saingy maro ny mpiserasera mihevitra fa misy mpanohitra vonona ny hanao ankivy miaraka amin'i Okraina ho fanoherana an'i Kremlin.
Ny mpikambana ao amin'ny parlemanta rosiana Robert Shlegel, ohatra, nisioka ny sary, miaraka amin'izao fanehoa-kevitra izao:
Amin'ny sary iray monja, dia levon'i Valeriya Novodvorskaya ao amin'ny atidohany mihitsy ny ankivy ara-piraisam-batana Okrainiana iray manontoloa. 🙂
Araka ny mpitranga dia natao photoshop ny sary. Ny sary dia avy amin'ny tafatafa nataon'i Novodvorskaya mombamomba ny fifandraisana Rosiana sy Isiraelianina (izany no mahatonga ny sary ahitana saina Isiraelianina). Nisy olona tena havanana tokoa amin'ny fanamboamboaran-tsary namoaka sarin'ny fanaovana ankivy mipetaka amin'ny t-shirt, niteraka fanesoesoana sy fanehoan-kevitra tsy tsara tao amin'ny Twitter.
Ny azonao atao amin'ny photo-shop, raha tarafina.
Amin'izao fotoana izao [nanoratana ny teny anglisy], mbola vao 156 ny isan'ny mpikambana ao amin'ny vondrona Facebook natokana ho amin'ny fanaovana ankivy ny fanaovana firaisam-batana, saingy nalaza haingana tao amin'ny mpiserasera aterineto Rosiana, izay nampiely ny sarin'ny vehivavy roa nanao ny t-shirt ofisialy (jereo etsy ambany), ny fanentanana. Tsy mahagaga raha maro ny Rosiana mpiserasera lehilahy no mamaly ny ankivy amin'ny fanaovana hatsikana manavaka ny mahalahy sy ny mahavavy. Egor Prosvirnin, lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny haba-tranonkala Rosiana nasionalista Sputnik & Pogrom, nanoratra tao amin'ny Facebook momba ny ankivy ara-panaovana, milaza ireo mpandray anjara amin'izany ho mpivarotena. Milaza izany hanihany izany koa ny maro hafa ao amin'ny LiveJournal sy ny toeran-kafa rehetra.
Afisim-behivavy ho amin'ny ankivy ara-panaovana?
Ny zavamisy, manampahaizana malaza (fa tsy amin'ny karazan'asa “antitra” indrindra) ireo vehivavy roa hita amin'ny sary eo ambony ireo. Ireo no Katerina Venzhik (ankavia), lehiben'ny fanoratana ao amin'ny tranonkalam-baovao Delo.UA, sy Irina Rubis (ankavanana), Filohan'ny Filakevi-Pitantanan'ny vavahadin-tseraseram-pandraharahana Ekonomika Communication Hub. Nopihana tamin'ny 21 marsa 2014, nandritra ny lanonana nokarakarain'ny Delo.UA, nilazàn'i Venzhik ny tafakatra amin'ny famaranana tamin'ny fifaninanana nampanaovin'ny haba-tranonkala “Vehivavy mpandraharahan'i Okraina 100 voalohany” ny sary. Nanatrika izany i Rubis, ary tao no nakàny sy Venzhik psaripika vitsivitsy. Tao amin'ny sary iray ireo vehivavy roa ireo no niakanjo ny t-shirt fanaovana ankivy ny fanaovana firaisambatana tambonin'ny akanjon-dry zareo.
Efa nisy tany amin'ny 2425 taona lasa tany, raha haingana indrindra, izany fisian'ny hevitra ankivy tsy hanao izany. Tamin'izany fotoana izany no nilalaovan'ny Ntaolo Grika voalohany ny Lysistrata, tantara tsangana miompana amin'ny nataon'ny vehivavin'i Gresy hampitsaharana ny adin'i Peloponezy tamin'ny alalan'ny tsy naneken-dry zareo tsy hanao tamin'ny vadiny na ny olon-tiany. Nosoratana fito taona talohan'ny naharesy an'i Athena tamin'io ady io ilay tantara.
Antenaina fa anjara tsara kokoa no miandry ny Okrainiana afaka fito taona, amin'ny 2021.